အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: အသည်းကြော် နဲ့ အသီးစုံ
အရင်တပတ်ကဆို တပတ်ထဲ ၄ ခါတောင် ကြော်စားဖြစ်တယ် အမေကတောင် ပြောယူရတယ် ခဏခဏ စားတာ မကောင်းဘူးတဲ့ အသည်းကြော်ပြောပါတယ်...မတတ်နိုင်ဘူးလေနော် ကိုယ့်အကျင့် က အဲ့လိုပဲ ကြိုက်တာဆို ရင် ခဏခဏ စားတယ် မကြိုက်တာဆိုရင် ပိုက်ဆံပေးမယ် ပြောတောင် မစားဘူး....ဒီလိုနဲ့ပဲ............
အရင်တခါကလဲ ကိုယ်ကြော်တဲ့ အသည်းကြော် ကို တင်ဘူးပါတယ် ဒီမှာပါ ချက်နည်းက တူတူပဲဆိုပေမယ့် ပြန်ဘတ်ကြည့်လိုက်ပါလေ မတူတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ် .....
ပြီးရင် ပုံမှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်း အိုးထဲ ကိုဆီထည့်ပါ။ ပြီးတာနဲ့ တခါတည်း ငရုတ်သီးခြောက်လေးတွေ ထည့်လိုက်ပါ။ ဟုတ်ပါတယ် ဆီမပူခင်ထည့်ရမှာပါ။ ဆီပူလာရင် ငရုတ်သီး က တဖြည်းဖြည်းကျက်လာပါမယ်။ ဆီပူမှ ထည့်ရင် ငရုတ်သီး က ကျွမ်းသွားပါမယ် အဲတာကြောင့် ဆီအိုးတင်တာနဲ့ တပြိုင်တည်း ငရုတ်သီးခြောက် ကိုထည့်ပါ ဆီပူလာရင် ငရုတ်သီး က အနံ့ နည်းနည်း ထွက်လာပါလိမ့်မယ် အဲ့တာဆိုရင်တော့ ကြက်သွန်နီ နဲ့ ဂျင်း ကိုထည့်လို့ရပါပြီ ငရုတ်သီး ကိုတူးတဲ့ အထိမစောင့်ပါနဲ့နော်........(နောက်မှ သတိမပေးဘူးမပြောနဲ့)
အိုးချခါနီးမှာ အပေါ်တတိယ ပုံမှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်း သကြားနည်းနည်း နဲ့ ခရုဆီလေး နည်းနည်းထည့်ပေးပါ ဆားအချိုမှုန့် က ခုန က နယ်တုံးက ထည့်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ အတွက် ထပ်မထည့်တော့ပါဘူး...
ပြီးရင်တော့ အချိုတည်း ရအောင် ပန်းမက်မုံလေးတွေစားသွားပါအုံးနော် ဒါက ဝူခုန်းကားထဲ က မျောက်မင်းဝူခုန်း တာဝတံသာ ပေါ်တက်ပြီး ခဏခဏ ခိုးစားတဲ့ ပန်းမက်မုံပါ ခုတော့ တရုတ်တွေ က ကမ္ဘာအနှံ့လှည့်လည်ရောင်းချတဲ့ အတွက် တီတို့လဲ ထိုင်းတို့ ဌာနေ ဘန်ကောက်မြေမှာတောင် စားနေရပါပြီ ငယ်ငယ်ကတော့ တောင်ကြီးမှာ မက်မုံအစိမ်းလေးတွေ ကို သကြားရည်နဲ့ စိမ်စိမ်ပြီး စားကြပါတယ်။ အသီးက အမွှေးလေးတွေပါလို့ စားခါနီးမှာ ဂွမ်နီအိတ်တို့ ဘောင်းဘီ တို့ နဲ့ပွတ်ပွတ်ပြီး စားခဲ့ရတာ မှတ်မိတယ် ခုဟာကတော့ သိပ်မတူပါဘူး သူက အခွံစားလို့ မရလို့ ခွာစားရတာပါ သရက်သီး အမှည့်နဲ့ နည်းနည်း အရသာတူတယ် သရက်သီး အမှည့်လောက်လဲမချိုပြန်ဘူး ခြုံပြောရရင်တော့ သိပ်စားမကောင်းပါဘူးပေါ့နော် ကဲရှင်းရော.......အလည်ပုံက အမေက ခွာပေးနေတာပါ နောက်ဆုံးပုံ ကတုတ်နဲ့ထိုးပြီး မောင့်ကို ကိုင်ခိုင်းထားတာ ဓါတ်ပုံရိုက်ဖို့အတွက်...
ဟုတ်ကဲ့ နာနတ်သီး ပါ ငရုတ်သီးမှုန့် ပျားရည် သကြား စတာတွေနဲ့ ရောသမမွှေထားတာပါ အိုအိရှိပါပဲ အားပေးကြပါအုံးနော်........
Posted by တီချမ်း at 9:11 AM
မိုးခါး April 27, 2011 at 11:38 AM
သရက်သီးနဲ့ နာနတ်သီး ရှလွတ်သွားတယ် .. :D
ချစ်ကြည်အေး April 27, 2011 at 12:13 PM
တီချမ်း ဒါကတော့ ညည်း ကျုပ်တို့ မိန်းမထုကြီး တရပ်လုံးကို သားရေကွင်းနဲ့ ပစ်ပြီး ရန်စလိုက်တာပဲအေ...စပ်ဖျင်းဖျင်းနဲ့အေ့....
အသည်းကြော် မကြိုက်၊ အသီးစုံတော့ သားရေကျသွားသကွယ်.....:)
Addy Chen April 27, 2011 at 12:18 PM
ကောင်းတယ် မိုးခါးစား ဘန်ကောက်လာရင် လုပ်ကျွေးမယ်
ဒေါ်ချစ် မိန်းမထု တရပ်လုံး ကိုမစရဲပါ လက်သီးကြောက်၏
ဒေါ်ရီတာကိုသာ စတာပါ ပရိုက်ဗိတ်ဂျုတ်ပါ ရှန့်
Mon Petit Avatar April 27, 2011 at 12:37 PM
Addy Chen April 27, 2011 at 12:41 PM
စားချင်ရင် လာလေ ငှဲလျောင်း ငှဲလျောင်း
Vista April 27, 2011 at 12:49 PM
သရက်သီး ဂလု ...
sweetpeony April 27, 2011 at 2:01 PM
နာနတ်သီး ချဉ်ရင် ကြိုက်ဝူးးးးး အသဲကြိုက်ဝူးးးးး
ဒါမယ့် အသဲအစား တခြားတခုခုနဲ့ ကြော်မယ်...း)
Addy Chen April 27, 2011 at 2:30 PM
အသဲမကြိုက်ရင် ဝက် ကြက် ကြိုက်တာ အစားထိုးပြီးကြော်ပေါ့ မသေချာရင် ဒီမှာ ကြည့်လိုက်
တီတောင် မနေ့ညက ကြော်စားသေးတယ် ဝက်နဲ့ ကောင်းမှကောင်း
ဗစ်ရေ သရက်သီး ဂလုရင် နောက်နေ့ သရက်သီး နဲ့စားတဲ့ တို့စရာ ချက်နည်း တင်ပေးအုံးမယ် ယုိုးဒယားနည်း
Kyaw Hnin Se Lwin April 27, 2011 at 5:29 PM
မေဒီ April 27, 2011 at 7:47 PM
Come n eat all.Delicious as usual...:D
Your brcketed 1st scentence makes me lol.You challenged or kidded us???????????......:)
I'll try your fried liver next week.Tks again.
Rita April 27, 2011 at 8:33 PM
အိမ်မှာ အတူနေတဲ့လူတွေ လာမေးကြည့်လှည့်ဦး။ မီးဖိုချောင်ဝင်ရင် ဘယ်လို၊ ဟင်းချက်ရင် အရသာက ဘယ်လိုဆိုတာ...
SHWE ZIN U April 27, 2011 at 9:13 PM
တီဖျော်ထားတဲ့ ငံပြာရည်အလှော်မှုံလေး နဲ့ တို့စားရင်ပိုကောင်းမယ် ထင်တယ်
lwin April 28, 2011 at 9:38 AM
တီချမ်း ထိုင်းတွေဖျော်တဲ့ ငပိစိမ်းစားနဲ့ ဖျော်တဲ့ငပိဖျော်နည်းလေးရေးပေးပါနော်။ လုပ်စားချင်လို့ပါ။နောက်ခေါက်မိုဒန်းလုပ်နည်းလေးရောဘဲ သိချင်ပါတယ်။
Addy Chen April 28, 2011 at 1:50 PM
လွင် က ဘယ်သူလဲ ဒေါ်ဂျူလား ငပိစိမ်းစားဖျော်တာ လုပ်ပေးမယ် မိုဒန်း က ဘာပြောတာလဲ တီမသိ